Koobka Jaamacadaha Sudan: Jaamacada Africa oo dhagta dhiiga u dartay Neelain +SAWIRRO – Gool FM
Koobka Jaamacadaha Sudan: Jaamacada Africa oo dhagta dhiiga u dartay Neelain +SAWIRRO
(Khartoum) 28 Agoosto 2017 Koobka ay sanad kastaahi soo abaabulaan Golaha Ardayda Qaranka Soomaaliyeed Ee Dalka Sudan ayaa cawa kulankiisi 2-aad la ciyaaray, iyadoo ay ku balansanaayeen kooxaha Jaamacada Africa (AIU) iyo Neelain.
Jaamacada Africa ayaa goolal gaaraya 10 gool ku garaacday kooxda mataleesay Jaamacada Neelainoo aan so bandhigin kubadi laga filanayay inay la soo shirtagaan, iyagoo awoodi waayay inay hor istaagaan weeraryahanada Jaamacada Ifriiqiya (AIU).
Goolkii kowaad kulanka waxa ku daah furay laacibka dhexda ka xamaasha Ee jaamacada Africa Barqad oo seddexley ka kacay kulankii xalay, wixi inta ka dambeyay waxa bilowday bandhiga ciyaartoyda jaamacada Africa oo qeybtii hore Ee ciyaarta ku soo gabgabeeyay 4-0.
Markii laga soo noqday kaambiyada oo ay bilaabatay qeybtii 2-aad Ee Ciyaarta, waxay ifriiqiya sii fogeesay Neelain oo isku dhex yaacday garan weysayna halka laga soo maray, wuxuna xiddiga garoonka Catoosh is daba dhigay daafacayada Neelain, halkaane goolkisi 3-aad ku daliyay.
Intaan la dhalin goolashi 6-aad iyo 7-aad, Tababaraha Ifriiqiya ayaa sameyay bedelo is xigxigay aad mooday inay u soo galeen garoonka inay sii ziyaadiyaan musiibada heysatay Neelain, waxeyna dhamaan laacibinti bedelka ku soo galeen dhaliyeen goolal marki laga reebo daafacaooda C/shakuur oo fursad gool qurux bdn uu ku dhalin karay iska qasaariyay.
Ugu dambeyn waxa Neelain laga dhaliyay goolashi 9-aad iyo 10-aad, iyadoo boortaha Africa uu sina u ogolaan waayay in xitaa laga dhaliyo goolka calanka oo inbadan ay isku dayeen ciyaartoyda Neelain balse isku daygooda waxa beeniyay boortaha Africa oo soo bandhigay bandhig aad loola riyaaqay oo cajab galiyay taagerayashi soo xaadiray garoonka.
Jaamacada Neelain ayaa sida boorsadaheeda uga xirxiratay koobka jaamacadaha sudan oo raacday wadadi Jaamacada Bahri lagu saaray kulankii 1-aad, waxana haatan bandarka semi finalka fadhiya kooxaha Africa (AIU) iyo Gadareif oo sugaya natiijada kulanka isha lagu wada hayo Ee dhex mari doona 28-ka bishan maalinka Isniinta habeeni talaado soo galeeso kooxaha kala matalaya Jaamacadaha Emaaraat iyo Garden oo ah kooxdihanatay koobki ugu dambeyay Ee la qabtay sanadi hore.
Goolasha Africa waxay ka kala yimaadeen ciyaartoydeeda Catoosh oo dhaliyay 3 gool halka barqad uu dhaliyay seddex kale, waxane min 1 gool dhaliyay kambal, khaalid, rabiila, qasaali iyo Norwija.
W/Q: Abdirahman Mohamed Hersi ” Xidiga Maanka “
DEG DEG: Chelsea oo Arsenal kala heshiisay Qiimaha Alex Oxlade-Chamberlain
Alexis Sanchez oo dalab bixitaan ah u gudbiyay Arsenal iyo kooxda oo beenisay warkaas